भ्रष्ट्रचार नगर्ने प्रतिज्ञा !
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असोज १७ गते सवै मन्त्रालयमा कार्यान्वयनार्थ जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब हरेक दिन, हरेक मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय मातहतका कर्मचारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि ईमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने सपथ खानु पर्नेछ ।
नूनको सोझो त गर्नै पर्छ, अनि गर्छौं पनि, हामी जनताको कामदार हौं, तपाँईको काम ढिलासुस्ती नगरी गर्छौं भनेर सरकारी उच्चअधिकारीहरु भन्ने गर्छन, अनि मातहतका कर्मचारीलाई पनि त्यसै गर्न आग्रह गर्छन् । केहि बर्ष अगाडि मुस्कानसहितको सेवा भन्ने नारा खूब घन्कियो । कर्मचारीहरुले अब मुस्कानसहित जनताको काम गर्छन भनेर आशाबादी भएकाहरु उहिल्यै खिस्स परे । बा¥ह बर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै समय फेरियो, उखानले संकेत गरेको ब्यबहार फेरिएन ।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा सेवाग्राहीले शुरुमा नमस्कार पाउनु पर्छ अनि लिएर गएको काम तत्काल बन्नु पर्छ भन्ने बहस पनि नचलेको हैन । यो बहस व्यबहारमा लागु हुनु पनि पथ्र्यों । जनताको काम गर्न भनेर जनताको करबाट तलब खाएर बसेका कर्मचारीहरुले नूनको सोझो गर्छौं भनेर ओठे प्रतिबद्धता गरे पनि व्यबहारमा देखिएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको प्रतिज्ञा दैनिक बाचन नै हुनेमा शंका छ ।
आज भन्ने शब्दै नभएको नेपाली कर्मचारी संयन्त्रमा पुगेकै दिन जनताको काम बनेन भनेर अचम्म नमाने हुन्छ । संस्कार नै त्यही छ, चलन नै त्यही छ, व्यबहार नै त्यही छ, सिकेको नै त्यही छ । नानीदेखिको बानी कहिल्यै नजाने । हजूरबाको पालामा न्याय पाउँ भनेर निबेदन दिए नातिको पालामा बल्ल निर्णय आउँछ । अबस्था यस्तो छ, अरु अब के भन्ने ?
जनसम्पर्क धेरै हुने कार्यालयमा घोषित अघोषित रुपमा दलालहरु नियुक्त भएका हुन्छन, सबै प्रक्रिया पु¥याएर सेवाग्रही पुगे पनि दलालबाहिरबाट गएमा काम बन्न असम्भब प्रायः छ । अघिल्लो दिन भने अनुसार काजगपत्रहरु पूरा गरेर गए पनि बिभिन्न बाहानाहरु थपिएकै हुन्छन । काममा ढिलाई गर्नु वा गर्दै नगर्नु पनि भ्रष्ट्रचार हो । ‘कामचोर’ कर्मचारीका लागि दुई वर्ष अघि गत्तिलो बाहाना बनेको थियो लोडसेडिङ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद छ । केन्द्रमा काम लिएर जाँदा सवै अधिकार स्थानी तहमा गएको छ भन्छन, स्थानीय तह हाम्रो यो अधिकार नै हैन भनेर पन्छिन । यहाँ काम कसरी गर्ने भन्दा पनि कसरी नगर्ने उपाय खोजिन्छ । सवै कुरा ठीकठाक भए पनि कर्मचारीलाई भोलिवादले गाँजेको छ । अन्त्यबिहिन भोलिको श्रृंखला कत्ति ईपिसोड दोहोरिन्छ, कुनै टुङ्गो छैन । द्रब्यले किचिएको श्रृखंला द्रब्यले नै मुक्त गर्न सक्छ कि ?